Norway: Nidaamka xukunka qoyska boqortooyada jumhuuriyad halagu badalo. - NorSom News
Qoyska boqortooyada Norway. Sawirka: Gety-Images
Xildhibaano katirsan baarlamaanka, kana soo jeedo ilaa shan xisbi oo kala duwan ayaa baarlamaanka Norway u gudbiyay hindise sharciyeed ay ku dalbanayaan in wax laga badalo dastuurka Norway, si meesha looga saaro xukunka soo jireenka ah ee qoyska boqortooyada Norway. Kaas oo dalka ku leh awood aan rasmi aheyn, balse dhaqan ahaan soo jireen ah.
Xildhibaanadan ayaa sheegay in xiligan la joogo ama la noolyahay ay xaqdaro weyn tahay in awooda lagala dhaxlo, balse waxey taas badalkeeda soo jeediyeen in la sameeyo nidaam dadka Norway kunool ay si codbixin leh ugu soo dooranayaan qofka ay markaas iyagu u arkaan inuu matalo.
Xildhibaanadan ayaa soo jeediyay in la sameeyo afti dadweyne oo dadka Norway kunool lagu weydiinayo inay rabaan inay Norway loo badalo jumhuuriyad(Republik) aan laheyn boqor ama qof madax dhaqameed ah oo awood dhaxaltooyo ah kursiga ku helo.
Ilsa xildhibaanadan ayaa sanadkii hore baarlamaanka geeyay mooshin noocan oo kale ah oo ay ku dalbanayeen in la baabi´iyo nidaamka boqortooyada Norway, balse mooshinkaas ayaan markii golaha baarlamaanka la geeyay heli codad aqlabiyad ah oo uu ku meelmaro.
Xigasho/kilde: Folkevalgte fra både høyre og venstre vil ha republikk.
Previous articleBooliska: Awood uma heyno inaan dabagalno dadka aan xiran marada afka.
Next articleBooliska: Qofkii aan xiran marada afka, 22.000 kr ayaa lagu ganaaxi karaa.